January 12, 2020 - ThutaSone
၁ပုံ ၁၀၀နဲ့​ရောင်းနေတဲ့ အသက် ၉၀ အဘွား ထမင်း ၁၀၀ဖိုးဆို တ​နေကုန်​စားလို့ရတယ်​တဲ့
January 12, 2020 ThutaSone 0
စာဝါသွားရင်း လမ်းမှာ အဘွားအို​တွေ့တာနဲ့ အဘွားအသက်​ဘယ်​​လောက်​ရှိပြီလည်း​မေးကြည့်​​တော့ ၉၀ရှိပြီတဲ့ ဒီဟာ​တွေကဘာလုပ်​မလို့်​လည်း ​၁ပုံ ၁၀၀နဲ့​ရောင်းမလို့အဘွားက ထမင်း၁၀၀ဖိုးဆို တ​နေကုန်​စားလို့ရတယ်​ ။အဘွားကအသက်​ကြီးပြီဆို​တော့သိပ်​မစားနိုင်​​တော့ဘူးတဲ့ ​စိတ်​ထဲမ​ကောင်းတာနဲ့ ကိုယ်​တက်​နိုင်​သ​လောက်​​လေးလှူ ဒါန်းခဲ့တယ်​။ မိဘစော်ကား ဒဏ်(၁၀)ပါးမိမိ မှန်သည်ဖြစ်စေ ၊ မှားသည်ဖြစ်စေမိဘတွေများအား ဒေါသတကြီး၊ အော်ကြီး၊ဟစ်ကျယ်ပြန်လှန်ပြောဆိုခဲ့မိလျှင် လက်ရှိ ပစ္စုန်ပ္ပန်ဘ၀တွင်ဖေါ်ပြပါဒဏ်ဆယ်ပါးထဲက အနည်းဆုံး တစ်ပါး […]
ဩစတြေးလျ တောမီးဘေးသင့်နေသောနေရာရှိ တိရစ္ဆာန်များအတွက် မုန်လာဥနီနှင့်ကန်စွန်းဥများကို လေယာဉ်ပေါ်မှကြဲချ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ်အစိုးရက တောမီးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီး အစာရေစာပြတ်တောက်နေသည့် သားပိုက်ကောင်များအတွက် မုန်လာဥနီနှင့်ကန်စွန်းဥ ကီလိုထောင်နှင့်ချီ၍ လေကြောင်းမှ ကြဲချပေးလျက်ရှိသည်။ နယူးဆောက်ဝေးလ်အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများက ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကိပ်ထရီးနှင့်ဝိုဂန်တောင်ကြား၊ ယန်ဂိုအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ကင်ဂရူးတောင်ကြား၊ ဂျီနိုလန်ဒေသတစ်ဝိုက်၊ အော့စလေမြစ်နှင့် ကာရာကူဘန်ဒီအမျိူးသားဥယျာဉ်တို့ရှိ သားပိုက်ကောင်များနေထိုင်ကျက်စားရာနေရာများသို့ အစားအစာများကြဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မီးဘေးသင့်သောတိရစ္ဆာန်များအတွက် လတ်ဆတ်သောသစ်သီးဝလံ ကီလိုဂရမ် ၂၂၀၀ ကျော်ကို […]
ဦးနှောက်သွေးခဲခဲ့ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ ဗေလုဝ
သရုပ်ဆောင်မှာလည်း ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ အကြည်တော်ရဲ့ ဘီလူး ဆိုတဲ့ ဇတ်ကားကြီးဟာလည်း တော်တော်လေးကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ပိုင်းအရ ကြီးမြင့်လာသော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ သူတတ်မြောက်ထားတဲ့ အနုပညာနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပျော်ရွှင်စေသူဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဗေလုဝဟာ ဟာသအနုပညာနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တင်ဆက်ယုံသာမက စာအုပ်စာပေများနဲ့လည်း အသိပညာများကို မျှဝေသူတစယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို […]
ဘုန်းကြီးမဟုတ် ဘိုးတော်မဟုတ်ပဲနဲ့ လူပေါင်း (၁၂၀၀)ကိုဦးဆောင်ပြီး အဓိဌာန်ဝင်ခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
တစ်ခေတ်တစ်ခါက မော်ဒယ်လောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး စမိုင်းလ်က အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို သိပ်မလုပ်ကိုင်တော့ပါဘူး။ စမိုင်းလ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စီးပွားအတူတူရှာရင်း သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ထိမ်းကြောင်းပြုစုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူအပင်ကင်းပြီး သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စမိုင်းလ်တို့ မိသားစုကတော့ ပရိသတ်တွေ အားကျခြင်းခံရတဲ့ မိသားစုလေးတစ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ […]
ဒို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ် လေးစားတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တာပဲ
ဒို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ် လေးစားတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တာပဲ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပိုက်ဆံတွေကို ၅တန်းနှစ်မှစပြီးတက္ကသိုလ်အလယ် ယနေ့အဆုံး နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါး မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားစွာသိမ်းလာတာတဲ့ အရမ်းကိုလေးစားပါတယ်ဗျ ကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ် လေးစားတယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပိုက်ဆံတွေကို ၅တန်းနှစ်မှစ တက္ကသိုလ်အလယ် ယနေ့ အဆုံး နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါး မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားစွာသိမ်းလာပါသောချစ်ခင်ပွန်း Credit: Aung […]
၀န်ထမ်း လုပ်သက် ၁၅နှစ်ကျော်သည့်တိုင် ဆုတံဆိပ်တခုမှ မရသေးဘူးဆိုလျှင်
နိင်ငံ့ဝန်ထမ်းကောင်း(၃) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်လုပ်သက် ၁၅နှစ်ကျော်ပြီး တံဆိပ်တခုမှ မရသေးဘူးလို့ ညီငယ်တွေက ပြောပြောနေကြလို့ပါ….. တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းဆောင်မှုအတွက်ချီးမြှင့်ရန် သတ် မှတ်ပြဌာန်းထားသော ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် (၁၆)မျိုးရှိပါသည်။ ယင်းတံဆိပ်(၁၆)မျိုးးတွင် နယ်ဘက်ဝန်ထမ်းများရရှိနိုင် သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်မှာ(၄)မျိုးသာရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ– (၁) […]
ရှိသမျှ မိန်းကလေးအားလုံး ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရွာလေး
ခေတ်ကာလတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ ပြောင်းလဲကုန်ကြပါတယ်….မိတ်ကပ်ကြောင့် မိန်းကလေးတွေကလည်း ပိုပိုလှလာသလို..တဖက်မှာလည်း သနပ်ခါးဆိုတာပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်….တချို့မိန်းကလေးတွေက ဆံပင်တွေဆေးဆိုး အတိုညှပ်ပြီး ကိုရီးယားမလေးတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမယ့် ရွာက မိန်းကလေးတွေက တစ်ရွာလုံးနီးပါး မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြတာပါ…. မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပျားစည်ရွာက မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ရွာလုံးနီးပါး […]
အတိုင်​ပင်​ခံ ပုဂ္ဂိုလ်​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ အား ၀ါရှင်​တန်​သို့ လာ​ရောက်​ရန်​ အမေရီကန်သမ္မတထရန့်မှ အထူးဖိတ်​ကြား
မြန်​ မာနိုင်​ငံ လူထုအစိုးရရင်​ဆိုင်​​နေရသည့်​ ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ အကြပ်​အတည်းများကို ​ဖြေရှင်းနိုင်​ဖို့ အ​မေရိကန်​အစိုးရအ​နေနှင့်​တတ်​နိုင်​သမျှ ကူညီ​ထောက်​ပံ့သွားမည်​၊ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ အ​မေရိကန်​လုပ်​ငန်းရှင်​များ ၀င်​​ရောက်​ရင်းနှီးမြုတ်​နှံဖို့အတွက်​ အ​မေရိကန်အစိုးရအ​နေနဲ့ တိုက်​တွန်း​နေ​ကြောင်း အ​မေရိကန်​သံ အမတ်​ကြီး ​ပြော ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ အကြပ်​အတည်းများ ​ဖြေရှင်းနိုင်​ရန်​ အ​မေရိကန်​အစိုးရသည်​ တတ်​နိုင်​သမျှ ကူညီ​ထောက်​ပံ့မည်​ဟု မြန်​မာနိုင်​ငံဆိုင်​ရာ အ​မေရိကန်​သံအမတ်​ကြီးမစ္စတာစ​ကော့မာစီရယ်​က ပြော […]
အိန္ဒိယ၏ တစ်ကျော့ပြန်သာသနာခေတ်ဝန်ကြီးချူပ်ကအစ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ကူးပြောင်း
ဝန်ကြီးချူ ပ်ကအစ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ကူးပြောင်းအိန္ဒိယရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်သာသနာခေတ် Buddhism is returning to the land of origin. Buddhism is makingacomeback in India. အိန္ဒိယဝန်ကြီးချူ ပ်ကအစ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းပြီး […]
အခုခေတ် ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဆရာမလေးတစ်ဦးရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ပညာပေး သင်ခန်းစာ…
အခုခေတ် ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ပညာပေး သင်ခန်းစာ “သဉ္ဇာဝင့်ကျော်က လှလို့ပြတာပဲ ဘာဖြစ်လဲ ဆရာမရယ်” “ဆဲတာ သူများပစ္စည်းခိုးတာမှ မဟုတ်တာ မရှက်ပါဘူး ဆရာမ” ယနေ့ ကျွန်မရဲ့ပညာဒါနက ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ထဲက အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပါ။ ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေကို Physics ပုစ္ဆာ တွက်ပြနေစဉ်မှာ နောက်ဘက်တန်းနားက […]